Weerar Banbaano Oo Ka Dhacay Goob Waxbarasho Oo Ku Taalla Dalka Afghanistan | Hangool News
Weerar Banbaano Oo Ka Dhacay Goob Waxbarasho Oo Ku Taalla Dalka Afghanistan
Hangoolnews:- Ugu yaraan 48 ruux ayaa lagu dilay weerar banbaano oo ka dhacay afaafka hore ee goob waxbarasho oo ku taalla galbeedka Caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi.
Weerarka ayaa ka dhacay xaafada Shiicada ee Dasht-e-Barchi waxaana ku dhaawacmay daraasiin kale oo dad ah, Waheed Majrooh oo ah Afhayeenka Wasaaradda Caafimaadka ee dalka Afghanistan ayaa u sheegay warbaahinta.
Ciidamada ilaalada ayaa rasaas ka furay goobta iyaga oo iska ilaalinayay in dagaallamayaal kale ay gudaha u galaan goobta, balse waxa la caddeeyay in weerarka uu soo qaaday hal naftii hure.
Abdul Hossain oo ah hogaamiye bulsho ee Shiico ah lana jaar ah goobta weerarku ka dhacay , ayaa sheegay in bamka si badheedh ah loola bartilmaameedsaday kooras la dhiganayay, kuwaas oo ay rag iyo dumar dhalinyaro ah wax ku wada barayeen.
Ururka Daalibaan ee dalkaasi ka dagaallama ayaa iska diiday in uu ku lug lahaa weerarkaasi banbaano, mana jirto cid sheegatay illaa iyo hadda weerarkaasi.
Dadka Shiicada ah ee lala beegsaday weerarka banbaano ayaa ku eedeeyay weerarka in ay ka dambeeyeen Ururka ISIS ee ka dagaallama dalka Ciraaq.